Lammaaneyaasha da'da yar iyo ku tiirsanaantooda gawaarida - BBC News Somali
Lammaaneyaasha da'da yar iyo ku tiirsanaantooda gawaarida
Xigashada Sawirka, Transport for New Homes
Waa arrin aad u adag: waxaa laguu helay guri cusub oo ku yaalla agagaarka magaalada duleedkeeda, balse hadda badanaa waxaa ku xayiraya gawaarida.
Saacado ayaad ku jiraysaa gawaarida saxmadda jirta awgeed, maxaa yeelay xaafadahan ayaanan lahayn dukaanno, isbitaallo, iskuullo iyo shaqo toona.
Warbixin ayaa sheegtay inay saameynta ugu weyn la kulmaan lamaanayaasha da'da yar.
Arrintan ayaa timid ka dib markii ay dadkaasi guryo ka dhisteen meel gaari oo kaliya loogu safri karo.
Cilmi baareyaasha ayaa booqday in ka badan 20 xaafadood oo wada cusub oo ku yaalla guud ahaan dalka Ingiriiska, waxayna sheegeen inuu yahay baaritaankii ugu horreeyey ee noociisa ah oo la sameeyo.
Waxay ogaadeen in guryo badan oo cusub laga dhiso meelo aad uga fog magaalada, taas oo ay ku adagtahay dadka inay magaalada ku gaaraan baaskiil, maadaama aan badanaa laga hellin gawaarida adeega bulshada.
Jenny Raggett, oo ah khabiir baara arrimaha gaadiidka iyo guryaha cusub ayaa yiri: " Waxaa walwal nagu dhaliyey inaan aragno dhismayaal cusub oo aysan dadka deegaanka waxba samaysan karin ama heli karin haddii aysan haysanin gaari.
Steve Gooding waa agaasimaha shirkadda RAC, ee qaabilsan taageertayna cilmibaaristan. Waxa uu u sheegay BBC-da in loo baahanyahay barnaamij cusub oo lagu hormarinayo guryaha oo si dhab ah u leh kala xulasho dhanka gaadiidk ah, oo dabcan ay qeyb ka noqon karaan gaadiidka gaarka loo leeyahay. sidoo kale waa in xal loo helo guryahan cusub ee aanan laheyn meel baabuurta la dhigto, taasoo sababtay in gawaarida la iska dhigto hareeraha laamiga.
Dowladda waa in ay si wanaagsan arrintan uga fikirtaa, uma baahnin oo keliya guryo cusub oo meel walba laga dhiso, balse waxaan u baahanahay guryo tayo leh.
Meelaha qaar sida Poundbury, waxa ay muujineysaa in ay suuragal tahay in la sameyn karo iskudheeli tirnaan guryaha iyo baabuurta ah.
Nin iyo xaaskiisa oo war ka akhriyay taleefishin Kenya ku yaala